Xukuumada Oo Maanta Fasaxday Wadada Hor Marta Madaxtooyada Ka Dib Markii Ay Xidhnayd Laba Bilood. | Somaliland.Org
December 29, 2008	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xukuumada Somaliland ayaa maanta u fasaxday gaadiidku in ay maraan wadada madaxtooyada hormarta marka laga reebo gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada.
Wadadan ayaa laga xayiray in ay gaadiidku maraan ka dib markii ay weeraradii isqarxinta ahaa ee lagu qaaday madaxtooyada, Xafiiska wakiilka Itoobiya u fadhiya Somaliland iyo Xarunta Hay’ada UNDP ee magaalada Hargeysa ka dhacay 29-October ee sanadkan sii dhamaanaya.
Wadada madaxtooyada hormarta ayaa waxay tahay waddada wadnaha u ah caasimada, taas oo isku xidha suuqa dhexe ilaa iyo shacabka oo ay ku yaalaan hay’adaha dawlada iyo qaar ka mid ah hay’adaha kale, isla markaana ah waddada ugu saxmada badan isu socodka gaadiidka. Furitaanka maanta loo fasaxay in ay gaadiidku maraan ayaa sida u shalay sheegay taliyaha ciidanka bileyska Somaliland Maxamed Saqadhi Dubad in ay gaadiidku waddadaas isticmaali karaan 6:00 aroornimo ilaa 6:00 makhribnimo oo kaliya taas oo ah in maalintii oo qudha gaadiidku mari karaan balse habeenkii ay mamnuuc tahay in la maraa.
Waxaa kale oo uu u sheegay Mr: Saqadhi in hareeraha wadada inta u dhow madaxtooyada aanay gaadiidku istaagi Karin sida wakaalada biyaha, guriga uu degan yahay wasiirka arrimaha dibada.
Waddadan ayaa inta u dhaxaysa isgoyska madaxtooyada dhinaca bari kaga beegan ilaa isgoyska maaliyada dhinaca galbeed ka saaran inta u dhaxaysa waddo ahaan ayaa hore u xidhnayd muddo gaadhaysa laba bilood, taas oo ka dambaysay falalkii ay argagixisadu ku fuliyeen weeraradii isqarxinta ahaa ee 29 kii October ka dhacay caasimada.
Furitaanka waddada ay xukuumadu maanta u fasaxday in ay gaadiidku isticmaali karaan marista wadada aanay ku jirin iyagu gaadiidka waawayn ee xamuulka qaada ayaa waxay ku soo beegantay maanta oo bilow u ah sanadkii 1430 ee Hijriyada oo ah 1-dii bisha Muxaram ee sanadka cusub taariikhda Islamka.
Furitaanka wadadan ayaa dad badani markii ay maqleen in loo fasaxay gaadiidka waddadii wadnaha u ahayd caasimada ay aad ugu farxeen halka qaar kaloo badanina dareemo cadho leh ka muujiyeen ka dib markii ay maqleen furitaanka waddadaasi waa maalintii oo kaliya balse aanu socodka gaadiidka ee habeenkii ku jirin.
Waddadan oo xidhitaankeedu si weyn ayay dadku u dareemi jireen isla markaana foolxumo iyo naxdin ku ahayd caasimada baabuurta iyo tiknikada labada jaho ee galbeedka iyo bariga u kala jeeday taas oo dadku si weyn uga nixi jireen loona arki jiray in goobtu tahay tahay furin colaadeed.
Sidoo kale waddadan hor marta madaxtooyada ayaa aad u yaraatay ka dib markii kaabado waaweyn la dhigay qayb wadadan ka mid ah, taas oo baabuurta cidhiidhi ku ah isla markaana ay waddadii isku soo yaraatay waxaana laga yaaba inay shilalka baabuurtu bataan. Si kastaba ha ahaatee furitaankan maalintii uun gaadiidku socon karaan waddada aya waxay ku soo beegantay sanadkii cusbaa ee taarriikhda islaamka 1430-ka
Arrinta furitaanka waddada ee shalay ay xukuumadu ku dhawaaqday ayaa dad badani ku macneeyeen, waddadii waa la furay hadana lama furin !